फोनपेमा दैनिक ३० करोड माथिको कारोबार, प्रयोगकर्ता कति ? - Parichaya.com
फोनपेमा दैनिक ३० करोड माथिको कारोबार, प्रयोगकर्ता कति ?
By परिचय	 On ३१ भाद्र २०७८, बिहीबार १३:५८ 0
नेपालको अग्रणी भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक फोनपे पेमेन्ट सर्भिसमा मर्चेन्टको संख्या ५ लाख पुगेको छ । स्थापनाको दुई वर्षमै फोनपेमा मर्चेन्टको संख्या ५ लाख नाघेको हो ।
हाल फोनपेको क्यूआर मार्फत दैनिक ५० हजार कारोबारबाट ३० करोडभन्दा माथिको कारोबार हुँदै आएको कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै अन्तरबैंक रकम ट्रान्स्फर, फोनपे डाइरेक्ट गरी दैनिक एक अर्ब रूपैयाँ बराबरको सेटलमेन्ट हुँदै आएको छ ।
फोन पे बैंकिङ र मर्चेन्ट विस्तारको हिसाबले नेपालका सातवटै प्रदेशमा पुगिसेकको छ । यसको ६० प्रतिशत मर्चेन्ट प्रदेश नं ३ मा रहेका छन् भने बाँकी ४० प्रतिशत मर्चेन्ट अन्य प्रदेशमा फैलिएका छन् ।
फोनपे नेटवर्कमा ६० वटा बैक तथा वित्तीय संस्था आवद्ध छन् भने ४ लाख ५० हजार भन्दा बढि मर्चेन्ट रहेका छन् । एक करोड ३० लाखभन्दा धेरै मोबाईल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्तातथा ४५ लाख बढि भुक्तानी सेवाप्रदायकका मोबाईल एप्स्मार्फत यसले सेवाप्रदानगर्दै आएको छ ।
फोनपे विश्वविख्यात डाटा सुरक्षा मापदण्ड ‘पेमेन्ट कार्ड इन्डष्ट्रि डाटा सुरक्षा मापदण्ड’ पीसीआइ डिएसएस भि थ्रि।टु।वान प्रमाणीकरण प्राप्त संस्था हो ।
गरिमाका ग्राहकलाई बनेपाको ‘आगन्तुक रिर्सोट’मा २३ प्रतिशतसम्मको छुट
पोखराको बिरौटामा लक्ष्मी बैंकको १३६औं शाखा सञ्चालन